के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! - " सुलभ खबर "
काठमाडौं। के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी स’मस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सु’निने, गनाउने, नाइटोमुनि दु’ख्ने’, वीर्य खस्दा पो’ल्नेजस्ता स’मस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा स’ङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । ***थपपुरा भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *
पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलार्इ पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्या’न्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो । उनले भने, ‘प्रोष्टेट पनि भनिने पुरुषमा प्रजनन ग्रन्थीमा समस्या आयो भने माथि भनिएजस्तो लक्षण देखिन्छ । रोग लाग्न यी सबै लक्षण देखिनै पर्छ भन्ने होइन । तीमध्ये एकभन्दा बढी लक्षण देखिए पनि प्रोस्टेटको स’मस्या हो कि भनेर सतर्क हुनुपर्छ । *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,
जसले दैनिक क्रियाकलापमा असर पार्नुका साथै मिर्गौलामा समेत असर पर्न सक्छ । कसैको पिसाबमा त र’गत बग्न पनि सक्छ ।’ उमेर बढी भएका व्यक्तिमा मात्र देखिने भनिएको यो रो’ग पछिल्लो समय ३० देखि ४० वर्षका युवामा पनि देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । समयमै उपचार गरे सजिलै निको हुने यो रो’गलाई बेवास्ता गरे क्या’न्सर हुनसक्ने ख’तरा रहेको चिकित्सकहरू औल्याउँछन् ।
नाइटोदेखि अण्डकोषको भाग दुख्ने, मलद्वारदेखि अण्डकोषसम्मको भाग दुख्ने, पिसाब ननिख्रनेजस्तो हुने वा पिसाब लागिरहेकोजस्तो हुने तर फेर्न जाँदा नआउनेजस्ता लक्षण देखिने बताए । ‘प्रोस्टेट ग्रन्थीको मुख्य काम वीर्य स्वस्थ राख्ने र त्यसलाई हुर्काउन मदत गर्ने हो । वीर्य त्यतिबेला नियमित उत्पादन भइरहन्छ जतिबेला खर्च हुन्छ । जब वीर्य खर्च हुन छाड्छ अर्थात् स्थिर रुपमा रहन्छ त्यसपछि स’मस्या देखिन थाल्छ । अझ सजिलो गरी बुझ्दा दुई बाल्टीमा पानी भरौँ । एउटाको पानी नियमित फेरौँ तर अर्कोमा नफेरौँ । एक महिनापछि हेर्दा दिनहुँ फेरेको बाल्टीको पानी सफा हुन्छ भने अर्कोमा भने नफेरिँदा लेउ लाग्न थाल्छ ।
हो त्यस्तै हो वीर्य र प्रोस्टेट ग्रन्थीको सम्बन्ध पनि । जति वी’र्य निस्क्यो उति नै प्रोस्टेटलाई फाइदा हुन्छ,’ डा। रौनियारले भने ।चिकित्सकका अनुसार महिना या वर्षौंसम्म यौ’न सम्पर्क नहुँदा प्रोस्टेटमा स’मस्या देखिन्छ । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि नियमित यौ’न सम्पर्क गर्ने, २४ घन्टामा पाँच लिटर पानी पिउने, नियमित रुपमा पिसाबको जाँच गरी स’ङ्क्रमणबाट बच्ने र म्यो’ग्नेसियमयुक्त खानेकुरा जस्तै काजु, पेस्ता, बदाम, ओखरलगायत खाने गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ । **थप यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****,
सदिक्षको अर्को दाई पहिलोपटक मिडियामा, बल्ल बाहिरियो गो*प्य प्रमा*ण,प्रविनलाई यसरी मा*रेको रहेछ हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुहोस)